ပြည့်တန်ဆာနှင့် ဥပဒေ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
၁။ အမျိုးသမီး လွှတ်တော် အမတ်တစ်ဦးမှ နိုင်ငံတွင် ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းကို တရားဝင်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ဥပဒေရှိသင့်ကြောင်း အဆိုတင်သွင်းမည်ဟု ကြားသိရသောအခါ ထုံးစံအတိုင်းပင် ကန့်ကွက်သံ၊ လက်ခံသံ တဝေေ၀ ကြားရပါသည်။ ခံစားချက်ကို အဓိကထား ပြောနေသည်ကများပါသည်။ ခံစားချက်ကို ဘေးဖယ်၍ ပြောပြချင်သည်များရှိလာသည်။
(၃) ဖာထက် အရေးကြီးသည်မှာ ချုပ်ထားသော ခေါင်းများဖြစ်ပါသည်။ သူရို့က ဖာများကို ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်း၊ ဇိမ်ခန်းထောင်ခြင်း၊ ဖာဇာတ်သွင်းခြင်းများ လုပ်ပါသည်။ ဖာကိုဖမ်းသဖြင့် ပြဿနာ မပြေလည်ပါ။ အညှာက ခေါင်းများဖြစ်ပါသည်။ ဖာများကို ကယ်လိုလျှင် ခေါင်းကို အားပေးသော ဥပဒေပြုရေးထက် သူရို့ကို အရေးယူနိုင်ရန်သာ ကြိုးစားစေချင်ပါသည်။
This entry was posted on December 28, 2012, in အတ္ထုပ္ပတ္တိ, ဥပဒေ, ဆောင်းပါး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ကျောက်ဖြူမြို့နယ် ဒုက္ခသည်စခန်းမှ စစ်တပ်အချို့လိုက်ပါလျှက်.ကျောက်ဖြူဈေးသို့ရိက္ခာပြတ်နေ၍ ဈေးဝယ်ထွက်ရာ ဈေးသို့ေ၇ာက်သော် ရခိုင်ရဲများဝိုင်းလာ …
အစ္စရေးတွင် နှစ်ပေါင်း ၂၇၅၀ သက်တမ်းရှိ ဘုရားကျောင်းနေရာ တွေ့ရှိ →